अन्य बिधा (कथा) | मझेरी डट कम
Prakash Giri — Tue, 06/13/2017 - 21:57
छ्या! कस्तो प्यारीको वैँशभन्दा पनि उखर्माउँलो गर्मी आज! साँच्ची...मोरीले बिहानै फोटो राखेकी थिई। कारखाना जान ढिला हुनाले प्रोफाईल हेर्न पनि पाईएन! मेरो साहुँ एकदमै किचकिचे छ...।
सधैँ मोटिका फोटोसँगै आँखा जुधाँएर बस्ने भएर हुनुपर्छ, मोटिको टाईमलाईनको नक्शा निकै प्रष्ट छ मलाई। उसको ‘विईसिङ्ग फर चेन्ज’ वाला पोष्ट पछाडि हामी एस्तै गर्मी छेल्न भद्रकाली जाँदाको फोटो थियो, आजैँ हटाईछे...सिधैँ उसको नत्थीवाला फोटो देखियो। नत्थि लगाएका यूवतीले मलाई पगालीहाल्छन्। मोरीले त नत्थि नलागाँउदै पगालेकी हो!
HomSuvedi — Mon, 09/12/2016 - 18:22
चराहरु गुँडतिर फर्किरहेछन्
सूर्य पनि पश्चिममा पुगेर
पृथ्वीमा सुन पानी छरिरहेछ
अहिले भर्खरकाे कुरा हाे
सिङ्गो पृथ्वी नै
सुनको पिण्ड भान परिरहेछ ।
मलाई पनि यस्ताे बेलामा के हुन्छ के हुन्छ
विरहले आकुल व्याकुल गरिरहेछ ।
Biju Subedi — Fri, 02/19/2016 - 03:17
धेरै किसिमका फूलहरू स्वर्गका थुप्रै बगैंचाहरूबाट लिइएको एउटा अत्यन्तै ठूलो फूलको गुच्छासहित प्रिय तिमीलाई अत्यन्तै ठूलो धन्यवाद !
मेरी प्यारी स्याफ्रोन !!!
म एकदमै हल्का महसुस गरिरहेको छु तिम्रो माया, समर्पण, आदर, सत्य, आज्ञाकारिताका भावनाहरूबाट र तिमीलाई कस्तो छ ? अवश्य नै तिमी पनि यस्तै छ्यौ ।
lokenojha — Sun, 02/14/2016 - 12:11
Ramnath Khanal — Sat, 01/25/2014 - 14:52
Raj Kumar Dhimal — Thu, 01/09/2014 - 04:08
राज धिमाल आशुतोष
मेरो प्रश्नको जवाफ उस्ले प्रश्नले नै यसरी दिई ।।
यस्तै जाडोको बेला थियो । म टोलाइरहेको थिँए । तर किन ? खै याद नै भएन । लाख कोसिस गर्दा पनि यो दिमागले सम्झिन नै सकेन । त्यतिकै मा पछाडीबाट कसैको आवाजले मलाई बोलायो । मैले शिर घुमाए ,जता बाट आवाज आएको थियो । मेरो सामु हातमा फुल लिएर उभिएकी थिइन् चढ्दो बैशालु उमेर कि एक युवती । "सानू ,तिमि कता हिडेकी हातमा फुल बोकेर ?" मेरो यो प्रश्नको जवाफमा उस्ले हातको त्यो फुल मेरो अगाडी राख्दै अनि ओठ टोक्दै भनी " आशुतोष ,के तिमी र म मिलेर एउटा love story बनाउन सक्दैनौं ?" अनि मैले त्यो फुल.........दुबैको ओठमा मुस्कान..........
ks — Sun, 07/14/2013 - 19:17
स्पर्श नगर फूललाई
जीवनकै पीडागित बन्ला
फुत्कन सक्दैन तिम्रो हात
चुम्बकरुपी फूलबाट ।
सोचेथें, एकदिन म पनि स्नातक उत्तीर्ण भएर त्यो सुन्धारानेरको धरहरा चढौला । स्नातक उत्तीर्ण भएपछि मसँग पनि त हुने छ एउटा जागिर, एउटा गलफ्र्याण्ड, काली होस वा गोरी कोई त होली मेरो नि! तर, समय बडो निष्ठुरी बन्यो मेरा लागी । म स्नातक उत्तीर्ण भएँ, साह्रो खुशी लाग्यो । तर, जागिरले मसँग नाता तोड्यो, कालीले नि मसँग नाता तोडी । म एक्लो भएँ । कति रहर थिए मनभित्र ! उत्तीर्ण भएर कालीसित, काठमाण्डौलाई धरहराउपर चढेर नियाल्ने मेरो रहर थियो । त्यो धरहरा सधैं मुस्काइरहन्छ । धरहरा भन्दछ, आऊ मेरो समीप, मेरो बुई चढेर तिमीले हेर ती सुन्दर-सुन्दर दृश्यहरु! तर, कति जटिल बन्यो मेरो मनको यो रहर!
atript — Tue, 02/21/2012 - 02:38
वरिपरी सुकी झरेका पातहरु छन्,बिचमा म छु| मलाई लाग्छ यी पात र म मा कुनै भिन्नता छैन |
atript — Thu, 02/25/2010 - 18:02
चिसो हावाको सिरेटो सँगै मान्छेहरुको आउने क्रम्म बाग्लिदै थियोत्यस माथी रात पनि क्रमिकरुपले ढल्किदै थियो । होटेलमा पच्छिम्ली किसिमका गीत ताल न बितालको जति जति मान्छेको ओइरो बढ्न थाल्छ छिपिदै गरेको रातल
pushpa — Tue, 08/04/2009 - 19:41
चुरोट र मेरो सम्बन्ध कहिले देखि सुरु भयो ठ्याक्कै बताउन त सक्दिन तर यो सम्बन्ध एउटा समयाबधिसम्म असाध्यै गाढा रह्यो। स्कुलको अन्तिम बर्षहरुतिर हो, शायद नौ-दसमा हुँदा, पहिलोपल्ट साथीहरुको लहैलहमा चुरोटक
kbs — Wed, 04/15/2009 - 19:08
हासेकै राम्री तिमी